शैलजालाई बिर्सने, शुष्मालाई चाकडि गर्ने ?
शैलजा आचार्य, क्रान्तिकारी महिला नेतृ, मर्ने बेलासम्म पनि कांग्रेस । जीवनभर त्याग, निष्ठा, समपर्ण र राजनैतिक सभ्यताकी अभियन्ता । नेपाली कांग्रेस निर्माण अभियानकी कुशल कालीगढ पनि ।
विपी कोइरालाकी प्रिय, आत्मीय र विश्वासीलो सहयोगी । जीवनभर कांग्रेसका लागि गरेको संघर्ष भन्दा बढी मृत्युसँग उनले ठूलो संघर्ष गर्नुपर्यो । पछिल्ला दिनमा अपमान, पीडा र यातनाको चर्को भेद व्यर्होनु पर्यो । २९ जेठ २०६६ सालमा उनी मृत्यु शैथ्यामा संघर्ष गर्ने क्रममै धर्ति छोडेर गइन् ।
उनी कांग्रेसको मात्र नेतृ थिइनन् । तर, कांग्रेस हुनुको नाताले कांग्रेसीजनबाट उनीप्रतिको श्रद्धासुमन र अगाधता जुन हैसियतमा हुनुपर्दथ्यो त्यो भएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको बेडमा मृत्युसँगको तीब्र संघर्षका बेला उनीसँग भेट भएको यो पंक्तिकारले उनीप्रतिको कांग्रेसी व्यवहार बारे सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी समेत गरेको पनि हो ।
तर, आज उनको फेरि याद आयो ।
भारतीय नेतृ तथा पूर्वविदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजको दुःखद निधनप्रति संसारभरीबाट प्रतिक्रिया आए । त्यो स्वभाविकै छ । भारतभरी उनका चाहाने वालाहरुले शोक मनाएको खबर आयो, त्यो पनि श्वभाविकै छ । नेपालका तर्फबाट निकटतम छिमेकी देशको प्रभावशाली नेतृको निधनमा वक्तव्य जारी हुनु त्यो पनि स्वभाविक नै हो । पार्टीका नेता र व्यक्तिगत रुपमा परिचित विदेशीमन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुले शोक समवेदना व्यक्त गर्नु तथा श्रद्धान्जलि संप्रेषण गर्नु त्यो पनि कुटनैतिक शिष्टाचार नै हो । विभिन्न कारणले व्यक्तिगत सम्बन्धमा रहेका नेपालीहरुलाई मन मुटु र आत्माबाट उनको निधनले पिरोल्नु त्यो पनि स्वभाविक नै छ । तर, श्रद्धान्जलि र समवेदनाको यतिधेरै बाढी पैदा भयो कि, त्यसले हाम्रो आफ्नो मौलिकतालाई चर्लाम चुर्लुम ढाकेर गर्लाम गुर्लुम पारेजस्तो भयो ।
उनले भारतीय राजनीतिमा पुर्याएको प्रभाव आफ्ना ठाउँमा विशिष्ट होला नै, अनि उनको कुटनैतिक अनुहार र व्यवहार आकर्षक र प्रभावकारी पनि होला नै । तर, नेपालप्रतिको हेराई र व्यवहारमा उनको बोली, आँखा र मिठो प्रस्तुति मानवतासँग जोडिएन, त्यो भूकम्पका बेला गरिएकोनाकाबन्दीले नै प्रष्ट हुन्छ । कसैले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको पनि पाइन्छ । भारतले नाकाबन्दी नलगाएको भए उत्पादन र आत्मनिर्भरताको प्रश्न यति महत्वको विषय नबन्ने र ज्वलन्त हुन नसक्ने टिप्पणी पनि भइरहेका छन् । भारतीय स्वार्थलाई संप्रेषण गर्न माहिर कलाकी धनी उनको जय-जयकार भारतमा हुनु स्वभाविकै हो । तर, नेपालमा हामीले अचाक्लि नै गर्यौ ।
भर्खरै अखिल र नेविसंघको सदस्यता लिएर राजनीतिमा आकर्षित भाइ–बहिनीदेखि लिएर वडा, गाउँ, जिल्ला र प्रदेश तहका राजनीतिकर्मीले समेत ‘शुष्मा स्वराजजी नेपालकी असल मित्र’ भनेर धुमधाम वक्यौं । फेसबुक र सामाजिक संजालमा शुष्माका बारेमा आएका स्तुति र महिमा हेर्दा उनी ‘नेपाल माता’ नै भएकी पो रहेछन की भन्ने छनक आउने गरी भजन पनि गायौं । छिमेक ‘भारत’ की महिला नेतृको अचानकको मृत्युमा मुलुकका तर्फबाट दिइने औपचारिक सम्बन्धका आधारमा दिने सम्मानको बारलाई यसपाली हामीले भत्कायौं । नेपाल र नेपालीले उनीप्रति कति सम्मान गर्नुपर्दछ यसमा मतभेद होलान् तर श्रद्धान्जलि र समवेदना दिने नाउँमा हाम्रा तर्फबाट बढि भावुकता प्रकट भएको बेला भारतीय शाषकहरु हाम्रो यो भावनात्मक संप्रेषणको मूल्यांकन राम्रै गरुन् भन्ने कामना छ मेरो पनि ।
तर, विषय गम्भीर छ । हामी कति शक्तिमुखी अनि स्वार्थी र परिनिर्भर भएका छौं भन्ने हिसाब यसबाट पनि देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा हाम्रै नेतृ शैलजा आचार्यले पुर्याएको योगदान बराबर शुष्मा स्वराजको हिसाब निकै तल छ । नेपालकै छोरी शैलजाको निधन हुँदा सहानुभुति, समवेदना र श्रद्धान्जलि व्यक्त गर्न दहकस मान्ने हामीहरुले शुष्मा स्वराजलाई कति धेरै सम्झन सक्यौं ? आफूसँगको हिरा नचिनेर अरुको ‘चाँदी टल्काइ’ मा गरिएको हुटहुटिबारे हामीले अब त समिक्षा गर्नुपर्दैन र ? भावनामा बहकिँदा भोली त्यसले राष्ट्रिय रुपमा कस्तो असर पार्छ भनेर प्रत्येक नेपाली नागरिकले सोच्नै पर्छ भन्ने लाग्दछ । किन कि, प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफू सिंगो राष्ट्र हौ भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ । त्यसकारण पनि शैलजालाई विर्सने, शुष्मालाई चाकडी गर्ने ? यो त अलि हजम भएन कि ?